Iyo nyowani vhezheni yeMiswe 3.16 inosvika, kugovera kwakanangana nekusazivikanwa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeMiswe 3.16 inosvika, kugovera kwakanangana nekusazivikanwa
Mushure memwedzi miviri yekuvandudza kuvhurwa kweshanduro nyowani yekuparadzirwa kweLinux "Miswe 3.16" yakaratidzwa (Iyo Amnesic Incognito Live System) iyo yakavakirwa paDebian package dhatabhesi uye yakagadzirirwa kupa isingazivikanwe kupinda kune iyo network.
Kune avo vachiri vasingazive nezveMiswe, vanofanira kuziva kuti izvi Kugovera kweLinux kunoenderana neDebian mapakeji uye yakagadzirirwa kupa kusazivikanwa kuwana kune network. Asingazivikanwe kupinda kuMiswe inopihwa naTor. Zvese zvinongedzo, kunze kwetraffic kuburikidza neTor network, zvakavharirwa nekusarongeka nepaketi firita.
Encryption inoshandiswa kuchengetedza mushandisi data munzira yekuchengetedza data remushandisi pakati pekutanga
1 Main nyowani maficha eMiswe 3.16
2 Dhawunirodha Miswe 3.16
3 Maitiro ekuvandudza kune iyo nyowani vhezheni yeMiswe 3.16?
Main nyowani maficha eMiswe 3.16
Shanduro itsva ye Miswe 3.16 inouya neshanduro dzakagadziridzwa dzeTor Browser 8.5.5 mairi mune iyi vhezheni itsva yewebhu webhu yakachinjika kushandisa iro idzva rakatsiga bazi reTor 0.4.1, pamwe nekuwedzerwa kweshanduro nyowani yeNoScript 11.0.3.
Iyi vhezheni itsva ye Tor Browser 8.5.5 inoenderana neiyo ESR Firefox 60.9.0 base base, mairi 10 kusagadzikana kwakagadziriswa, yenyaya mbiri dzakaunganidzwa pasi peCVE-2019-11740 dzinogona kutungamira kusangano rekuipa kodhi kuitiswa
Kuwedzera kune iyo bug (CVE-2019-9812) iyo inoita kuti ikwanise kupfuudza yakasarudzika sandbox nekushandisa Firefox Sync.
Izvo zvakakosha kutaura izvozvo Tor Browser 8.5.5 ichave yekupedzisira vhezheni yeTor 8.5 yakateedzanaMuna Gumiguru, kuburitswa kweTor Browser 9.0 zvichibva pabazi idzva reFirefox 68 ESR richagadzirirwa.
Chimwe chezvinhu zvakagadziridzwa zviri muMiswe 3.16 iri Thunderbird 60.8 uye Linux kernel (4.19.37-5 + deb10u2), iyo yakagadzirisa iyo SWAPGS kunetseka (Specter v1 sarudzo).
Shanduko yakaitwa mune iyi nyowani vhezheni yeMuswe ine LibreOffice Math application iyo yabviswa, iyo, kana zvichidikanwa, inogona kuiswa kuburikidza neiyo yekuisa wizard yezvimwe zvirongwa.
Uye zvakare, kuendeswa kweyakafanotaurwa seti yemabhukumaki muTor browser yakamiswa uye maI2P neICC maakaundi akagadzirwa otomatiki muPidgin.
Pakupedzisira zvinoratidzwawo izvozvo Tails kodhi yakagadzirwazve kuviga dhisiki zvikamu neTail mushandisi data.
Dhawunirodha Miswe 3.16
Nezve izvo zvinodiwa nesisitimu ino kuti umhanye pakombuta yako iwe unofanirwa kuve nezvinodiwa izvi kukwanisa kuiisa pasina matambudziko.
Chekutanga uye chakakosha ndechekuti iwe une mukati kana kunze DVD muverengi kana kugona kubhuroka kubva kune USB ndangariro.
Miswe inoda 86-bit x64-64 processor inoenderana: IBM PC inoenderana uye nezvimwe, asi kwete PowerPC kana ARM saka Miswe haishande pamapiritsi mazhinji nemafoni.
2 GB ye RAM kushanda pasina matambudziko. Miswe inozivikanwa kuti inoshanda neshoma ndangariro, asi iwe unogona kusangana nehunhu hunoshamisa kana tsaona.
Maitiro ekuvandudza kune iyo nyowani vhezheni yeMiswe 3.16?
Si Iwe unotova neyakambo dudziro yeMiswe uye nyora rondedzero yeshanduro dzinogona kuvandudzwa kune iyi vhezheni itsva, iwe unofanirwa kuvhura terminal uye uite inotevera mirairo.
Kutanga isu tinogadziridza runyorwa rwedu rwe mapakeji uye zvinyorwa ne:
Isu tinoratidza kuti vanovandudzwa ne:
Iye zvino isu tinofanirwa kurodha pasi nekumisikidza yazvino vhezheni yemapakeji, kutsamira uye zvichangobva kuitika.
Pakupera kweizvi tinobvisa mapakeji ese akapera asingachadiwe
Pakupera kweizvi, isu tinofanirwa kutangidza komputa yedu kuitira kuti shanduko nyowani dziitwe uye isu titange neshanduro nyowani yeMiswe.
Uye takagadzirira neizvi isu tatova nemutsva miswe mitsva muchikwata chedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo nyowani vhezheni yeMiswe 3.16 inosvika, kugovera kwakanangana nekusazivikanwa
GNOME 3.34, ikozvino yawanikwa muArch Linux repositories, inouya kuManjaro
Debian inozotsigira zvakare akawanda ekutanga masystem